Fikarohana momba ny firaisana Fahaiza-miaina taloha, fisainana ara-panahy, fanabeazana ara-panahy & fitarihana ara-panahy amin'ny tranga famerenana indray an'i Rosario Weisz | Henrietta Roos-Weisz - fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fifandraisana ara-panahy
Fampahafantarana an'i Francisco Goya & Leocadia ary Rosario Weisz
Francisco Goya dia teraka tao 1749 ary nanjary iray amin'ireo malaza espaniola malaza teo amin'ny tantara. Ny mpanjaka Espaniola, Ferdinand VII, dia nanendry an'i Goya ho mpitsabo mpanampy. Goya, indrisy, nahita an'i Ferdinand mpanohitra iray sy 1819, dia nanapa-kevitra ny hiala ao amin'ny kianjan'i Madrid izy mba hody any an-tanindrazany, ivelan'ny tanàna.
Ho any amin'ny tranokala vaovao any ivelan'i Madrid, dia nitondra ny zanak'olo-mpiray tam-po amin'i Leocadia Weisz, izay teraka tao 1790 i Goya ary noho izany dia 40 taona latsaka noho i Goya. Nanambady aloha i Leocadia ary nanan-janaka roa, Guillermo sy Rosario, tamin'ny alalan'izany fanambadiana izany, saingy nandao ny fianakaviany ny vadiny. Teraka tao 1814 i Rosario, taloha kelin'ny nandaozan'ny rainy ny tranony.
5 taona i Rosario fony izy sy ny reniny nifindra niaraka tamin'i Goya tao amin'ny tranony tany ivelan'i Madrid tamin'ny 1819. Leocadia, izay nokaramaina ho mpikarakara trano tamin'ny voalohany, dia lasa tompovavin'i Goya.
Tamin'ny 1824, natahotra i Goya tamin'ny famoretan'ny Mpanjaka Ferdinand ny hetsika politika malala-tanana ary nanapa-kevitra ny handao tanteraka an'i Espana izy. Nifindra tany Bordeaux, France izy, ary tany no nividianany trano ary nentiny niaraka taminy i Leocadia sy Rosario. Nikarakara an'i Goya izy roa vavy mandra-pahafatiny tamin'ny 1829.
Taorian'ny fahafatesan'i Goya dia niverina tany Madrid i Leocadia sy i Rosario, ary nitady asa tanana i Rosario. I Rosario dia lasa mpanao kopia sary hosodoko tao amin'ny tranombakoka Prado. Notendrena ho Profesora momba ny hisarika ny Mpanjakavavy Isabella II izy avy eo.
Ian Stevenson dia nitantara fa nanana fahazarana mahazatra ny sary hosodoko i Goya.
Ny fiainana taloha: ny talenta henrietta ho an'ny zavakanto
Henrietta Roos dia teraka tao 1903 tany Amsterdam, Holland. Tany am-boalohany dia nampiseho talenta voajanahary izy tamin'ny fanaovana sary, hosodoko sy mozika. Tamin'ny taona 5 dia nampiasa menaka izy mba hampisehoana an-tsary marina ny rainy. Tamin'ny taona 12 dia nanao sary hosodoko tamin'ny vorona roa izy ary tamin'ny taona 16 dia nanomboka nandoko sary mihetsika kely izy. Raha 18 izy, dia nandoko ny sarin'ny reniny izy. Henrietta dia te hianatra asa an-tsoratra, fa ny ray aman-dreniny kosa tsy nankasitraka azy ary tsy namela azy hanao izany.
Nandritra ny taonan'ny 22, dia nanambady an'i Franz Weisz, pianista hongroà i Henrietta. Henrietta dia nanamarika fa nahasarika kokoa ny anarany noho ny toetrany izy. Ny fanambadiana dia namela azy hanohy ny faniriany ho mpanakanto ary tamin'ny taona 24, niditra tao amin'ny Akademia Royal Academy of Art izy, izay nifantohany tamin'ny hosodoko.
Ny talentany dia voamarika ary nandritra ny telo taona isan-karazany, dia nomena ny lokan'ny mpanjaka avy tany Queen Wilhemina izy, izay namela azy hianatra tany Paris.
Fiainana taloha: fiainana i Henrietta ho an'ny anarana Weisz
Henrietta nisara-panambadiana an'i Weisz tamin'ny taona 30. Na dia natao ho an'ny vehivavy nisara-panambadiana aza ny fomba nentim-paharazana any Holandy hanamarina ny anarany, dia nanohitra i Henrietta. Hoy izy tamin'ny reniny, momba ny anarana hoe Weisz:
“Tsy haiko fa fahatsapana hafahafa izany. Tsy azoko hazavaina, mety amiko izany anarana izany. Mahatsiaro ho iray miaraka amin'izany aho, izaho dia mihoatra ny anarako Roos. Isaky ny miantso ny tenako toy izany aho dia mahatsapa fa miresaka olon-kafa. ” (1)
Avy eo dia nifindra tany Frantsa izy ary tonga dia nahay teny Frantsay nandritra ny fotoana fohy. Nandritra ny taona 20 nanaraka, dia nanangana ny tenany ho mpanao hosodoko tany Frantsa izy, na dia mpanao dika ofisialy ho an'ny Museum Louvre ao Paris aza.
Mediumship: Ny Fanahy Miteny amin'ny Henrietta sy ny Fafan-java-mitranga iray amin'ny alalany ao anaty haizina
Indray hariva tamin'ny taona 1936, fony izy 33 taona, dia natory aloha i Henrietta, satria narary izy. Tampoka teo, nisy feo niteny. Toa avy any afovoan'ny androny ilay feo. Hoy ilay feo:
“Aza kamo be, miarena, ka miasà.” (2)
Tsy fantatr'i Henrietta izay hatao ary nanandrana tsy niraharaha ilay feo izy, fa niverina ary nanao fanambaràna mitovy fanindroany. Henrietta dia mbola nijanona teo am-pandriana ary nanandrana natory. Avy eo ilay feo dia niteny fanintelony, saingy tamin-kery sy mafimafy kokoa:
“Aza kamo be, miarena, ka miasà.” (3)
Henrietta dia nihaino ilay feo ary nivoaka avy teo am-pandriana. Nataony teo ambanin'ny jiro kely ny efitranony kely tao amin'ny efitranony keliny. Avy eo izy dia nahatsapa hery iray niditra tao aminy, izay nahatonga azy halefaka ilay barazy mankany amin'ny efitrano maizim-borona ao amin'ny efitra, izay tsy hitany na inona na inona. Andeha isika hamela an'i Henrietta hamariparitra ny zava-nitranga nanaraka:
“Ny palette-ko, mbola feno hosodoko, dia teo ambony latabatra, ary koa takelaka lamba kely. Noraisiko ity - ary nanomboka nandoko aho, tsy dia fantatro izay nataoko, tao anaty haingam-pandeha, nandritra ny 45 minitra, rehefa nahatsiaro ho mavesatra be aho. Tsy maintsy namono ny borosiko aho. ” (4)
Afaka natory tamin'ny farany ihany i Henrietta. Rehefa nifoha izy, dia nahatsiaro ilay feo ary nieritreritra tao anaty haizina izy. Nanontany tena izy raha nofy izany. Nitsambikina avy teo am-pandriana izy mba hijery ilay kerobima ary nahita sary tsara tarehy misy tovovavy iray manana endrika lavitra. Ny masony dia nahasosotra an'i Henrietta. Gaga izy noho izany fisehoan-javatra izany.
Ity sary hosodoko vehivavy tsara tarehy ity dia asongadina eo amin'ny fonon'ny bokin'i Ian Stevenson, Cases eoropeanina momba ny karazana fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao, ary omena etsy ambony sy ankavanana.
Ny Clairvoyant mampahafantatra an'i Henrietta ny fifandraisany amin'ny fiainana taloha niaraka tamin'i Francisco Goya
Henrietta dia niantsoantso haingana ny namana iray mba hijery ilay sary, izay talanjona tamin'ny hatsaran'ny sary. Hoy ny namany iray:
“Oh, Henriette, o malalako, mahafinaritra ity, tsara ity! Fantatrao ve izay hataonay? Hoentintsika any amin'ny fivoriana iray hanaovana fikarohana ara-tsaina io. Isaky ny alakamisy tolakandro dia manana mpitsikilo izy ireo, manan-talenta fanomezana lehibe, ary ento miaraka aminao ny lamba kely. ” (5)
Nandritra ny fivoriana dia hitan'i Henrietta fa vehivavy antitra sy tsy dia tsara tarehy izy. Napetrak'i Henrietta teo amin'ny latabatra teo akaikin'ilay vehivavy antitra ny sarony niaraka tamin'ny sarin'ilay zazavavy tsara tarehy, ary teo koa ireo nametraka zavatra hizaha ilay vehivavy. Nalain'ny clairvoyant ny hosodon'i Henrietta ary nianjera tamin'ny fahitana izy. Nilaza i Henrietta fa nanampina ny masony ilay vehivavy antitra ary lasa fotsy volo. Nangovitra ny molony ary niteny moramora ilay vehivavy antitra hoe:
“Mahita litera volamena lehibe dia lehibe aho — anarana iray no tsipelina ho ahy, G — O — Y — A… miteny amiko izao izy. Hoy izy: mpanao hosodoko espaniola izy. Tsy maintsy nanidina avy tany amin'ny fireneny avy tamin'ny fahavalony izy, ary ianao no nandray azy tao an-tranonao tao amin'ny tanàna lehibe atsimo iray any Frantsa - hatramin'ny faran'ny fiainany. Mbola feno fankasitrahana azy noho izany izy fa te hitarika anao - saingy tsy afa-po izy, manohitra be loatra ianao, voafatotra loatra amin'ny fianaranao akademika ianao - tsy miala sasatra mihitsy ianao ary avelanao hitarika anao, ataonao sarotra be ho azy - noho izany dia nataony loko ianao tao anaty maizina, mba tsy ho hitanao izay ataonao. ” (6)
Henrietta ary talanjona tamin'ny fanambarana marina nataon'ny clairvoyant. Fantatr'ilay vehivavy efa antitra fa mpanakanto i Henrietta, nanana fanabeazana akademika tamin'ny kanto izy ary nanao ny sary hosodok'ilay zazavavy tamin'ny maizina.
Tari-dalana ara-panahy: Natao hanomezana fanazavana momba ny fiainana taloha i Henrietta
Henrietta tsy nahalala na inona na inona momba ny fiainan'i Goya. Ny androtr'iny ihany dia nandeha tany amin'ny mpanamory fiaramanidina izy, dia nasaina voalohany tany an-tranon'ny mozika Frantsay malaza. Rehefa tonga izy io hariva io, ny mpiangaly mozika, raha ny marina, dia nanana biography momba an'i Goya tao amin'ny bokiny. Nindrana ilay boky izy ary rehefa tonga tany an-trano izy, dia nanokatra azy io tany amin'ny toerana hafa teo afovoan'ilay boky i Henrietta.
Indray mandeha, toy ny hoe amin'ny tari-dalana dia nosokafana tao amin'ny pejy iray izay nanoritsoritra ny fomba niainan'i Goya tamin'i Leocadia sy Rosario Weisz tany Bordeaux, Frantsa, tanàna lehibe iray any atsimon'i Frantsa, izay nikarakara azy hatramin'ny nahafatesany.
Tamin'ny alàlan'ity tantaram-piainan'i Goya ity dia toa nohamarinina araka izany ny fanambaran'ny zokiolona. Na dia nahazo ny vaovao aza, dia azon'i Henrietta ihany ny antony nahatonga azy hanana firaiketam-po amin'ny anarana Weisz. Izy dia nanana anarana mitovy, Weisz, ary tsipelina mitovy amin'ny azy, tamin'ny fahatongavany nofo taloha izay nitaizany an'i Goya tamin'ny taona faramparany.
Vantany vao azony io fifandraisana io dia nifarana ilay fifamatorana amin'ilay anarana Weisz, izay notazoniny nandritra ny telo taona taorian'ny fisaraham-panambadiany. Nanomboka teo dia nanasonia ny anarany tamin'ny sary hosodoko izy hoe "Henrietta Roos," fa tsy "Roos-Weisz."
Hevitra Media sy Fanoratan-gazety: Ireo tranga hafa izay nataon'i Henrietta ho fampahalalam-baovao ho an'i Francisco Goya
Henrietta dia nanana traikefa efatra hafa izay niseho tamin 'ny alalan' ny sary hosodoko i Goya. Amin'ireny toe-javatra ireny, dia nandoko haingana be izy ary namorona zavakanto tsara tarehy sady mora. Tadidio fa nalahelo mafy i Goya.
Ny ohatra faran'izay mampihetsi-po dia nahitàna mpanjifa nanan-karena tany Nice, Frantsa, izay nananan'i Henrietta ny fianakaviany haka ny sariny. Tena tezitra mafy i Henrietta ary rehefa avy nanodidina azy sy ny tsikiriny hikarakarany ny sary hosodoko ny fianakaviana manontolo, anisan'izany ny ankizy sy ny biby fiompy, dia tsapany fa tsy ho vitany ilay sary hosodoko.
Tao amin'ny fahakiviany, dia nitalaho mafy tamin'i Goya izy mba hanampy azy. Vetivety teo dia nanomboka nandoko haingana izy ary tao anatin'ny minitra vitsy, namokatra sy mampitolagaga ny loha-hevitra. Lasa anisan'ny sary hoso-doko indrindra izy io.
Ohatra iray hafa izay niseho fa naka ny fatin'i Henrietta i Goya dia nitranga tamin'ny 1960. Nakarena hanao sary hosodoko amina sary iray izy. Henrietta dia mamaritra ny sehatra:
“Efa imbetsaka aho no te handoko ity sary ity taloha. Tamin'ny fotoana naniriako nanomboka azy dia nisy zavatra nanakana ahy tsy hanao izany, ary isaky ny mametraka ny borosiko aho alohan'ny hanombohana ireo tsipika voalohany aza. Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nieritreritra ny hanao izany akory aho - ary tampoka (segondra vitsy monja!) Teo alohan'ny zotran-tongotro aho ary nanao ilay sary tao anatin'ny iray andro sy sasany. Nanjavona daholo ny manodidina ahy. Afaka niova izao tontolo izao. Hadinoko aza ny nisakafo. Rehefa naneno ny findaiko dia namaly aho fa tsy afaka miteny. Io dia hafainganam-pandehan'ny fahatezerana mafy toy ny tsapako rehefa nanao ny «tava zazavavy». Ary fahatsapana hafahafa iray hafa koa ny hoe efa vitako izao, manontany tena foana aho hoe ahoana no nanaovako azy. ” (7)
Ity sary ity dia noheverina ho anisan'ny tsara indrindra tamin'i Henrietta. Ian Stevenson dia nanamarika fa ireo fisehoan-javatra nisehoan'i Goya hisolo ny vatan'i Henrietta ireo dia nitranga nandritra ny 40 taona. Henrietta dia tsy nahatsapa fa nitarika azy i Goya na nitaona azy tamin'ny andavanandrom-piainany teo anelanelan'ireo tranga ireo.
Ireo tranga ireo momba ny fananan'i Goya ny vatan'i Henrietta hanampiana azy amin'ny fanaovana sary hosodoko dia mampatsiahy ahy ny zavatra niainako niaraka tamin'i Kevin Ryerson, mpampahalala vaovao fanta-daza izay naseho tao amin'ny bokin'i Shirley MacLaine. Rehefa tratry ny fahitana i Kevin ary mamela ny fanahy hanana ny vatany, izy ireo koa dia afaka mampiasa ny vatan'i Kevin hanao sary sy sary mandritra ny fihetsiketsehana ampahibemaso. Taorian'ny nipoiran'i Kevin tamin'ny fahitana azy dia tsy tadidiny izay nitranga nandritra ny fotoana. Mifanohitra amin'izany dia toa nahatsapa ny zava-nitranga i Henrietta rehefa nahazo azy i Goya.
Famantarana ny fiainana taloha: i Henrietta Leocadia na i Rosario Weisz?
Nilaza i Goya, tamin'ny alàlan'ny clairvoyant zokiolona, ​​fa nikarakara an'i Goya tany an-tranony tany amin'ny faritra atsimon'i Frantsa i Henrietta. Tamin'io andro io, nisy biography momba an'i Goya nosokafana tamin'ny pejy izay nanoritsoritra ny nataon'i Leocadia sy Rosario Weisz nikarakara an'i Goya mandra-pahafatiny tany Bordeaux, Frantsa. Avy amin'ny fampahalalana nomena, tsy mazava ny hoe Henrietta dia Leocadia, tompovavin'i Goya, na Rosario, zanakavavin'i Leocadia.
Mba hamahana izany fanapahan-kevitra izany, Ian Stevenson dia nanadihady ny maha-izy azy an'i Leocadia sy Rosario mba hahitana izay mifanaraka amin'ny toetran'i Henrietta.
Hitan'i Stevenson fa i Leocadia dia olona romotra be, tia olona, ​​tsy tia mivadika ary mpankafy vazivazy sy foara. Tsy nandoko izy ary toa tsy liana firy tamin'ny kanto. Ny toetran'i Leocadia, araka izany, dia tsy nifanaraka tamin'ny toetran'i Henrietta, izay mangina sy matahotra vahoaka, toa ny hita any amin'ny kaonseritra, diosezy ary foara.
Rosario kosa, etsy ankilany, dia tsy dia ara-potoana loatra, be fitiavana ary nofaritana ho mamirapiratra sy faly. Tia biby i Rosario, toa an'i Henrietta.
Tahaka an'i Henrietta, Rosario amin'ny maha-ankizy dia nanana talenta voajanahary ho an'ny hosodoko sy mozika. Tahaka an'i Henrietta, Rosario dia nanao sary mihetsika kely, izay noderain'i Goya tao anaty taratasy:
“Ity zaza mahatalanjona ity dia maniry hanao miniature, ary iriko koa izy; satria io angamba no fisehoan-javatra lehibe indrindra eto an-tany manao izay ataony amin'ny taonany. ” (8)
Ny biographers dia nanamarika fa i Goya dia nifandray akaiky tamin'i Rosario ary nantsoiny hoe zanany vavy mihitsy aza. Ity fifamatorana ity dia mety hanazava ny fanirian'i Goya avy amin'ny tontolon'ny fanahy hanampy an'i Henrietta amin'ny fivoarany zavakanto.
Taorian'ny niverenan'i Rosario sy ny reniny tany Madrid taorian'ny fahafatesan'i Goya, dia lasa mpanao kopia hosodoko tao amin'ny tranombakoka Prado i Rosario, sahala amin'i Henrietta izay lasa mpanao kopia tao amin'ny Louvre.
Tamin'ny 1840, Rosorio dia notendrena ho Profesora misarika ny Mpanjakavavy Isabella II. Taty aoriana tamin'ny 1840 dia tonga tampoka tazo izy tazo rehefa tratry ny rotaka. Mp biographer iray no nilaza fa natahotra be ilay tazo, izay niainan'i Rosario rehefa nifanehitra tamin'ireto vahoaka romotra ireto. Ity fanehoan-kevitra ity dia mifanaraka amin'ny fahatahoran'i Henrietta ny vahoaka. Nodimandry i Rosario taoriana kelin'izay, ny 31 Jolay 1840, tamin'izy 26 taona monja.
Noho ny fitoviana amin'ny toetra amam-panahy, talenta ara-javakanto ary mozika, ary ny fitiavan'i Goya an'i Rosario, nanatsoaka hevitra i Ian Stevenson fa azo inoana fa i Henrietta Roos, fantatra ihany koa amin'ny hoe Henrietta Roos-Wiesz dia Rosario Weisz tamin'ny andro taloha. Ny elanelana misy eo amin'ny fahafatesan'i Rosario sy ny nahaterahan'i Henrietta dia 63 taona.
Raha raisina io tranga mahavariana momba ny vatana vaovao io, dia maneho ireto fitsipika manaraka ireto:
Fandraisana anjara amin'ny fanahy, fitarihana ara-panahy & fanelanelanana: Ny lafiny miavaka amin'ity tranga ity dia toa ny fanahin'i Francisco Goya naka ny vatan-tenan'i Henrietta Roos imbetsaka mba hanampy azy hamokatra zavakanto mahafinaritra. Tsarovy fa i Henrietta no nanao ny sary hosodina voalohany tao anaty haizina, nanondro fa i Goya no nanao ilay hosodoko.
Ankoatr'izay dia afaka nifandray tamin'i Henrietta avy any amin'ny tontolon'ny fanahy i Goya, tamin'ny alalan'ny fampitam-baovao iray, nanome ny fampahalalana azy momba ny hoe iza izy ary nahoana izy no nanampy azy. Nilaza i Goya fa izy no nitari-dalana azy ho fankasitrahana an'i Henrietta nikarakara azy tany amin'ny tanàna lehibe iray tany atsimon'i Frantsa.
Ohatra iray hafa amin'ny fitarihana fanahy mazava i Henrietta fa nahita tantaram-piainana tao amin'i Goya tao an-tranon'ny mpitendry zavamaneno iray, tamin'io andro io ihany dia niara-niresaka tamin'ny clairvoyant izy. Rehefa nanokatra ilay boky i Henrietta, dia nianjera tampoka teo amin'ilay pejy nitantara ny fomba nikarakaran'i Leocadia sy Rosario Weisz an'i Goya mandra-pahafatiny tany Bordeaux, France. Izany dia toy ny hoe nitarika azy tany amin'ny boky sy pejy i Goya izay mety hahitan'i Henrietta ny fiainany taloha niaraka tamin'i Goya.
Mampahatsiahy ny tranga izany Louise Vanderbilt | Wayne Peterson, araka ny nitarihan'i Wayne ny boky iray tao amin'ny trano fivarotana iray izay tsy azony ara-bakiteny raha tsy ara-bakiteny. Manohitra ny sitrapony i Wayne ka nividy ilay boky ary taorian'io alina io, dia nahita ny fanalahidy hamantarana ny fiainany taloha tahaka an'i Louise Vanderbilt tao anatin'io boky io. Ny zavaboary fanahy dia mety ho mahery vaika amin'ny tari-dalan'ny olombelona.
Fiainana sy talenta taloha: Rosario sy Henrietta dia nizara talenta toy ny fahazazana ho an'ny zavakanto sy mozika, izay nanamarika fa i Rosario sy Henrietta dia nianatra ireo fitsipika ireo talohan'ny niorenany teo aloha. Rosario sy Henrietta samy nanoratra sary mihetsika kely avokoa, izy roa ireo dia lasa mpamoaka tranombakoka ho an'ny sary hosodoko ary samy nomena mari-pankasitrahana manokana izy ireo noho ny fahaiza-manaony. Rosario dia mpanao dika soratra ho an'ny Prado ary i Henrietta dia mpanao dika soratra ho an'ny Louvre.
Rosario dia voatendry ho profesora tamin'ny Drawing to Queen Isabella II ao Espaina, raha i Henrietta kosa dia nahazo ny loka tamin'ny Royal Wilhemina avy any Holland nandritra ny telo taona nifanesy.
Ny fampitoviana amin'ny talenta, ny fivoaran-kanto sy ny lalana momba ny asa anelanelan'i Rosario sy Henrietta dia tena mahatalanjona. Ity tranga ity dia mampahatsiahy ny zava-misy Paul Gauguin | Peter Teekamp ary Claude Ledoux | Wayne Peterson, izay nanamboarana talenta ara-javakanto sy fivoarana ara-javakanto ihany koa avy amin'ny fampodiana iray hafa.
Ny ohatra iray hafa, tsy dia manaitra loatra amin'ny fahaiza-manao avy amin'ny nofo taloha dia misy ny fahatsoran'i Henrietta nianatra teny frantsay rehefa nifindra avy tany Espana nankany Frantsa izy. Amin'ny maha-Rosario azy dia nipetraka tany Bordeaux, France izy, hatramin'ny faha-10 taonany ary tsy maintsy ho mahay teny frantsay izy tamin'io nofo io.
Reincarnation & Change amin'ny zom-pirenena: Teraka tany Espaina i Rosario ary nipetraka tany Frantsa nandritra ny fikarakarana an'i Goya tamin'ny solo-tena nataony. Henrietta dia teraka tany Holanda, na dia nifindra tany Frantsa aza izy mba hanohy ny asany amin'ny maha mpanao hosodoko azy.
1. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 238
2. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 238
3. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 238
4. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 238
5. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 239
6. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 239
7. Stevenson, Ian: Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, McFarland, 2003, pejy 241